Media sy Fanoratan-gazety · Jona, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Jona, 2015
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Jona, 2015
Amerika Latina 29 Jona 2015
Afrika Mainty 26 Jona 2015
Matetika ny Fampitam-baovao Tandrefana namariparitra an'i Afrika ho toerana maizina, tsy misy fanantenana. Nifamory teo ambany hashtag #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou ny Afrikana mpisera Twitter hanaporofo aminao fa tsy marina izany.
Fa Maninona no Sady Lafo no Mikisaka ny Internety ao Mali Miohatra amin'i Sénégal na Cote d’Ivoire Ohatra?
Afrika Mainty 25 Jona 2015
Misy hantsana goavana dia goavana tokoa ny fahasamihafan'ny saran'ny internety aoamin'ireo firenena ao Afrika Andrefana. Misy fikambanana iray nanao fanentanana mba hanova izany toe-javatra izany.
Amerika Latina 24 Jona 2015
Azia Atsinanana 22 Jona 2015
"Ankehitriny, ny olona ratsy fanahy no mitantana ary ny olona tsara fanahy no any am-ponja."